Real Madrid Oo Calaamadaysay Tabbarayaal La Filaayo In Ay Badalaan Zinedine Zidane – Heemaal News Network
Real Madrid Oo Calaamadaysay Tabbarayaal La Filaayo In Ay Badalaan Zinedine Zidane
Real Madrid ayaa baadi goob ugu jirta sidi ay u heli laheyd tababare bedela booska uu banneeyay macalin Zinedine Zidane, oo si lama filaan ah ugu dhawaaqay inuu ka tagay kooxda.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Madrid, ayuu Zidane ku sheegay in kooxda ay u baahan tahay is-badal iyo jiho kale oo cusub, kadib saddex sano oo uu leylinayay.
Zidane mudadaasi wuxuu qaaday saddex koob oo ah kan Yurub oo uu waliba isku xiriiriyey. Kiisi ugu danbeeyay wuxuu qaaday toddobaad ka hor.
Tababarayaal dhowr ah ayaa lala xiriirinayaa Real Madrid, waxaana ka mid ah macallinka kooxda Tottenham Mauricio Pochettino. Macalinkan da’da yar ayaa waxa uu toddobaadki hore saxiixay heshiis kordhin kale oo uu sannado kale kula sii joogayo Tottenham.
Tababarayaasha kale ee ay Real indhaha ku heyso ayaa waxaa ka mid ah macalinka xulka Jarmalka Joachim Low iyo tababaraha hadda wata Chelsea Antonio Conte. Conte ayaa aad loo saadaalinayaa inuu ka tagayo kooxda toddobaadyada foodda nagu soo haya.
Aabe Iyo Wiilkiisii Oo Xalay Nin Xanuunsanayaa Ku Dilay Mgaalada Gaalkacayo Ee Gobolka Mudug
Booliska Somaliland Oo Xabsiga U Taxaabay Sheekh Rusheeye
Gool Hayihii Xulka Qaranka Soomaliyeed Ee Sanadihii Danbe Oo Ku Geerooday Dalka Turkiga
Allaha u naxariistee Isbitaal kuyaala dalka Turkiga waxaa caawa ku geeriyooday Goolhayihii hore ee xulka Qaranka Soomaaliya Axmed Cabdulaahi (Axmed Yare) oo maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanaa. Geerida Goolhayihii hore ee xulka Qaranka Soomaaliya waxaa xaqiijiyay […]
Layliye Unai Emery Oo Beeniyey In Ay Isku Dhaceen Mezut Ozil, Sobobeeyayna Maqnaashihiisa
Waxaa la wariyey in Mezut Ozil looga reebay safka Arsenal kaddib markii uu muran dhexmaray isaga iyo Unai Emery, hase ahaatee tababaraha cusub ee Gunners wuu beeniyey in khilaaf u dhexeeyo labadooda. Ozil laguma soo […]
Xilka Qaranka Dalka Masar Oo Gaadhay Dalka Ruushka Kana Qayb Galaya Koobka Aduunka
Waxa waddanka Ruushka ka degtay diyaaraddii sidday ciyaartoyga xulka qaranka Masar uga qayb-gelaya Koobka Adduunka, taas oo maanta gellinkii hore ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Qahira. Xulka qaranka Masar ayaa si toos ah uga […]